Kuchemerera pakusvirana ndekwevakadzi chete here? - Masasi eHarare
DzeBonde Kuchemerera pakusvirana ndekwevakadzi chete here?
Kuchemerera pakusvirana ndekwevakadzi chete here?
Pakusvirana zvinozivikamwa kuti mukadzi ane murume anonzwisisa muviri wemukadzi wake anonakirwa kashanu kupfuura kunakirwa kwemurume. Izvi zvinobva pakutarisa manerves ari pakabhinzi kemukadzi tichimaenzanisa neari pamusoro pemboro yemurume. Zvinoonekwa kuti kabhinzi kari mberi chose.
Kotizve midzi yekabhinzi unopatsanurwa kuti hafu uku hafu uku kumativi ebeche zvokuti mboro iri mukati make ichikwiza mativi awa, manerves aya anodavira kukabhinzi. Kana mukadzi akazowanazve mukana wekuti uku ane mboro mukati, uku ari kukwizirirwa pakabhinzi, zvinonaka chose chose.
Zvinofungirwa kuti kunaka uku kunowanda zvokudzungaidza pfungwa kusvika mukadzi atanga kuchemerera, kureva kuti kuchemerera iratidzo yokunakirwa nekusvirana nemurume. Kotizve kana murume akanzwisisa kabhinzi akada kushamwaridzana nako. Mukadzi wake anongogara ari munhu anochemerera iri nyaya yokudzungaidzwa pfungwa nemanakiro azvinoita.
Saka apa tiri kubvunza kuti imi varume, pane paunombonakirwawo here kusvika pakuchemerera mukadzi wako, zvisiri zvokutofunga kuti “Rega ndimbochemerera.” asi kungoyerekana zvatoitika kubva pakunakirwa kuri pamusorosoro?